ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ဟင်းရည်အိုးထဲကို ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အဆာပလာ အသီးအရွက်တွေအားလုံး ပစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်
ပြီးရင် ခုလိုအဖုံးလေးအုပ်ပြီးထားလိုက်တော့ မကြာခင်မှာဘဲ စားလို့ရပြီဖြစ်တဲ့ ချဉ်စပ် မြေအိုးမြီးရှည်ရပါပြီ။
အိုးလိုက် စားချင်ရင် စားပါ
မလောက်ရင် အိုးနဲ့လည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ပါဆယ်ယူသွားပါး)
မြေအိုးမရှိလည်း ရှိတဲ့အိုးနဲ့ ချက်စားလို့ ရပါတယ်
အားလုံးဘဲ ချဉ်စပ် မြေအိုးမြီးရှည်ဖြင့် စိတ်ဆန္ဒပြည့်ဝကြသော အားလပ်ရက်များဖြစ်ကြပါစေရှင်။
31 Responses to “ချဉ်စပ်မြေအိုးမြီးရှည်...”
ချောရေ ပြင်ဦးလွင်မှာ ပထမဦးဆုံး အကြိမ်စားဖူးခဲ့တယ်။ အတော်ပဲ ဒီတစ်ပတ် အိမ်က ကလေးတွေ အတွက် မြေအိုးမြီးရှည်လုပ်ကျွေးလိုက်တော့မယ်။
တရုတ်မတွေနဲ့ပေါင်းပြီး အဲရာ လုပ်စားနေတာ..
မချော လက်ရာလေးစားချယ်လယ်.. ပြန်လာရင် လုပ်ကျွေးနော်..း)
မာမီ့ အကြိုက် ထင်တယ်
မြီးရှည်ပူပူလေး.. အနံ့နဲ့တင် အဲလေ.. ဓါတ်ပုံလေးနဲ့တင် ဗိုက်ဆာသွားတယ်။ တကယ်စားချင်တယ်း)))
ကုိုယ်လည်းစမ်းသပ်ချင်နေတာ။ မအားသေးလို့ ။း)
အလုပ်ရှုပ်သကွယ်.... မြေအိုးဝယ်ဖို့ ကကို စပြီး မဖြစ်နိုင်တော့လည်း.... စက္ခုအာရုံနဲ့ ပဲ ငမ်းသွားတယ်.... ။
စားနိုင်တဲ့သူတွေ စားကြပါ စားကြပါ။ :P :(((((((((((
ဟီးကြိုက်တယ် မြေအိုးကို လုပ်စားဦးမှပဲ :D
ရှိတာလေးတွေ အကုန်ပစ်ထည့်ပြီး ချက်စားဦးမှပဲ။
ငုံးဥက မရှိတာနဲ့ မရှိတာတွေများများ၊ ကိုယ်ကမသိတာနဲ့၊
ချက်ထားတာ စားချင်စရာလေး၊ တော်လိုက်တဲ့ငါ့အစ်မ။
စားချင်ိလိုက်တာ မိုးအေးအေးလေးနဲ့ ဆို အရမ်းစားကောင်းတာ :D
မြေအိုး တော့ မရှိဘူး ရွှေအိုး နဲ့ ချက်စားရင်ရော ရတယ် မဟုတ်လား ဟားးးးးးးးး
Thank you for the recepi, sis :)
သြော် ချွေးမက ပေါက်ကျိုင်းနဲ့ မောင်နှမလားဟင် :P
သူက ဒီလိုအိုးမျိုးတွေနဲ့ စားတာကိုး ကိုယ့်ခွက်တွေက
ဒါနဲ့ လုပ်စားမယ်ကွယ် ရာဝင်အိုး တလုံးလောက်ပို့ပေးပါလားဟင် :P
တစ်ခါနှစ်ခါလောက်တော့ စားကြည့်ဖူးတယ်...အိုးလိုက်စားရတယ်မို့လား...မကုန်နိုင်တဲ့အပြင် နည်းနည်းစပ်နေလို့ ခံတွင်းသိပ်မလိုက်ခဲ့ဘူး...ဒါပေမယ့် ဒေါ်ချောရဲ့မြီးရှည်ကတော့ အရသာရှိမယ့်ပုံပဲ...အင်း...အမြီးရှည်ရှည်ရတဲ့နေ့မှပဲ လာစားတော့မယ်ဗျာ...
ဟင့် အင့် မရဘူး အိုးလိုက်ဘဲ စားမယ်။(စဉ့်အ၀ါရောင်အိုးလေးက ချစ်စရာလေးမို့ အိုးလိုက်စားမည်ဟု ပြောလိုက်သည်)။ အိုးကလည်း ချစ်စရာ၊ အရသာကလည်းကောင်း၊ ပြောင်းဖူးကပါသေး။
(ချောရေ စင်္ကာပူမှာတုန်းက သိလား။ မြန်မာစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ မယ်နူးကို ကြည့်ပြီးတော့ မှာလိုက်တယ်။(ကြေးအိုးမှန်းမသိလို့ပါ၊ ကြေးအိုးဆိုရင်အရည်နဲ့ရော၊ ဆီကြက်နဲ့ရော စားဖူးသားပဲ။ အဲဒါနဲ့ တစ်ခါတည်းနှစ်ပွဲ မှာထည့်လိုက်တာ၊ စားပွဲထိုးက မျက်လုံးပြူးသွားပါလေရော)။ အဲဒါနဲ့ ကိုယ်မှာထားတဲ့အတိုင်းပဲ ပြောင်သလင်းခါအောင် ဘုဉ်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ချောရေ ကချင်ပြည်နယ်မှာ စစ်ပွဲကျင်းပကြတယ်ဆို။ ချောနေတဲ့နေရာနဲ့တော့ ဝေးတယ်မလား။ အန္တရာယ်ကင်း ဘေးရှင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ (တကယ်ဆုတောင်းပေးသည်)။ ဘေးဘယာဝေးကွာ ပြီး လိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝပါစေ...
ဂလု ဂလု။ ဘုဉ်းပေးချင်လိုက်တာ။ အဲလေ ယောင်လို့။ စားချင်လိုက်တာ။ (ဘုန်းဘုန်းတောက် ကွန်မင့်ဖတ်ပြီး ယောင်သွားခြင်း)။း)))
အမချော မြေအိုးမြီးရှည် တစ်ခါမှ မစားဖူးဘူး။ တွေ့ရင် ချက်ကျွေးရမယ်နော်။ လာစားမယ်။း)))
ပုံကြည့်ပြီးသွားရည်တွေကျလာတယ်... အမယ်များများထည့်ရတဲ့စားစရာဆို ကိုယ့်ဟာကိုယ်ချက်စားရမှာပျင်းတယ်... သူများချက်တာဆိုအဲလိုဘဲသွားရည်ကျမိရော..
ချောရေ မြေအိုးမရှိဘူး ဒန်အိုးပဲရှိလို့ ဒန်အိုးမြီးရှည်လုပ်စားကြည့်အုံးမယ်။ ထည့်ရတဲ့အဆာပလာကလဲ များလိုက်တာ။ အဲဒါတွေလဲ တခုမှမရှိဘူး။ မြီးရှည်ဖတ်က မုန့်ဟင်းခါးဖတ်လိုပဲနော်။ အဲဒီအဖတ်မျိုးတော့ရှိတယ်။ ဒန်အိုးထဲ မုန့်ဖတ်ထည့် ပြုတ်လိုက်ရင် ဒန်အိုးမြီးရှည် ဖြစ်ရော မဟုတ်လား ... :))
စားတော့ စားချင်တယ် အဲ့လောက်ကြီး လက်ဝင်တာမျိုးကျတော့ စိတ်မရှည်တာ အမှန်ပဲဗျး))
နှိပ်စက်ပြီ..မြေအိုးမရမကရှာဝယ်ရတော့မပေါ့လေ...း)ချောလက်ရာမြေအိုးမြီးရှည်လေး စားချင်လိုက်တာ..း))
မြေအိုးမြီးရှည် တခါမှ မစားဖူးဘူး၊ အသီးအရွက်တွေ စုံစုံလင်လင်နဲ့ ဆိုတော့ စားကောင်းမှာ သေချာပါတယ်။
အဲ့မြီးရှည်ဆိုတဲ့ နာမည်ကြီးကိုမကြိုက်လို့ တစ်ခါမှ မစား
မြီးရှည်ကတော့ ကြိုက်မှကြိုက်...း)))
Hi Ma Chaw, your clay pot noodle look nice & Tastefull, pack & takeaway for Ma Kom.
မချေကတော့ နှိပ်စက် သဗျာ.
ညီမလေး ကအစားပုတ်သော မချောတင်သမျှ ဟင်းချက်နည်းတွေ တခုပြီးတခု ဖတ်ပြီးစမ်းလုပ်စားကြည့်တယ် ဟီးးးးးးးးးအခုလဲကော်ပီလိုက်ပြီ ...........
The photo is very taste
တခါမှ ကိုယ်တိုင်မလုပ်စားဖူးဘူးး.ဆိုင်မှာစားတယ်..ခုတော့ ကိုယ်တိုင်ချက်မှ စားရတယ်..မြေအိုးမရှိလည်း စတီးအိုးနဲ့ ချက်ရင် စတီးအိုးမြီးရှည်ပေ့ါနော် မချော..:P